Iindaba-Jin Jun Mei?Da Hong Pao okanye zombini?
UJin Jun Mei, kunye noDa Hong Pao, bakhula kwiNtaba yeWuyi, ngelixa eyokuqala ikwihlathi lokuqala leWuyi Mountain Nature Reserve, eyesibini kwimingxunya yamatye.Ezimbini zezona Tea zaseTshayina zibalaseleyo, zeziphi incasa ngcono?
Xa kuziwa ekubeni uJin Jun Mei okanye uDa Hong Pao ukulungele ukusela, kufuneka aqale kwiindlela zabo zokusela.I-Jin Jun Mei, eyeyeti emnyama, inencasa ecocekileyo eswiti yeti emnyama, ubushushu bayo bamanzi otywala bufanelekile malunga ne-85 centigrade, kwaye kuyimfuneko ukwahlula isuphu yeti kumzantsi wegqabi emva kwemizuzwana eyi-10, okanye iti. iyakungcamla intwana engqindilili endaweni yokutsha kunye neswiti.
Kwi-Da Hong Pao, kungcono ukusela malunga nemizuzu eyi-1-2 ngamanzi abilayo, kwaye ivumba lelitye elifakwe kwiti liya kukhutshwa.Incasa kaDa Hong Pao inobunono, incasa ekrakrayo kunye ne-astringent ekuqaleni kwaye imnandi kwaye ihlala ixesha elide.Inayo zombini ubumnandi beti emnyama kunye nevumba elimnandi leti eluhlaza.
Ke, eyona nto ibalulekileyo kukukwazi kakuhle iindlela zokusela zeti ezimbini xa kufikwa ekubeni yeyiphi iti engcono ukusela.Ngaphandle koko, kukwaxhomekeke kukhetho lomntu.Khetha uJin Jun Mei ukuba uthanda iti enencasa eswiti;okanye uDa Hong Pao ukuba ukhetha iti enevumba elitsha.
Ifowuni: + 86-831-8166850
Ixesha lokuposa: Dec-09-2021